Naagaha hurda badan oo la ogaaday in ay ka kacsi badan yihiin Dumarka kale. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Naagaha hurda badan oo la ogaaday in ay ka kacsi badan yihiin Dumarka kale.
Naagaha hurda badan oo la ogaaday in ay ka kacsi badan yihiin Dumarka kale.
Bulsha:- Warbixintan oo ah mid caalami ah oo soo baxday manta oo Khamiis ah ayaa sheegeysa in Dumarka hurdada badan ay ka dareen fiican yihiin Dumarka kale ,marka loo eego dhinaca kacsiga.
Shirkad ka shaqeysa arrimaha Bulshada ,gaar ahaan arrimaha galmada ayaa baahisay Warbixintan ,oo ay ku sheegtay in ay tahay mid cusub oo lagu ogaaday Warbixin ay baaris ku sameeyeen qubarro dhinaca galmada ah.
Warbixintan oo aheyd mid dheer oo ka koobneyd 122 pagge ayaan waxaan ka soo tarjunay Nuqulka ugu muhiim san oo taabanaya arrimaha ugu muhiimsan ee la xiriira farqiga u dhaxeysa Naagaha hurdada badan iyo kuwa hurdadooda ay caadiga tahay.
Hurda ayaa la ogaaday in ay ku abuurmaan unugyada ugu muhiimsan ee dhanka kacsiga ,sidaas daraadeed Naagta hurdada badsata ,waxaa ku abuurmaayo dareen kacsi oo aad u daran.